Keshvari oo mar kale maxkamad lasoo taagi doono. - NorSom News
Keshvari oo mar kale maxkamad lasoo taagi doono.
Dhageysiga dacwada Kiiska khiyaanada lacageed ee Afhayeenkii hore ee arrimaha soo galootiga xisbiga Frp, ahaana xubin baarlamaan oo katirsanaa xisbigaas, Mezyar Keshvari ayaa gali doono wareeg labaad oo maxkamdeed. Waxaana kiiskaas mar kale dhageysigiisa u fariisan doonto maxkamada racfaanka.
Maxkamada hoose ayaa Keshvari ku xukuntay 7 bilood oo xabsi ah, balse xeer ilaalinta ayaa racfaan ka qaadatay xukunkaas, iyaga oo sheegay inuu ahaa xukun aad u yar, marka loo fiiriyio danbiga uu Keshvari galay ee xadida xoolaha dowlada.
Keshvari ayaa lagu heystaa inuu baarlamaanka Norway ka xaday lacag gaareyso 450.000 kr, taas oo uu ku qaadan jiray si sharci daro ah. Balse keshvari ayaa qirtay danbiga lagu soo oogay, isaga oo celiyay dhamaantii lacagtii uu baarlamaanka ka khiyaameeyay, waxaana kiiskiisa loo galay qaab kiis qirasho.
Xeer ilaalinta ayaa aaminsan in mudada 7 bilood ee ninkan la xukumay ay aad u yartay, sidaas darteed ay mar kale maxkamada racfaanka ka codsan doonaan in xukunka xabsiga loo kordhiyo.
Xigasho/kilde: Bedragerisaken mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ender i lagmannsretten
Previous articleKiiska gabar soomaali ah iyo haweenay 70-jir Norwiiji ah oo maxkamada sare gaaray.
Next articleUDI-da oo dadka kula talineyso inay sugaan codsiga dhalashada Norway.